Faahfaahin Magacyada Saraakiil Lagu Dilay Qarax Ka Dhacay Agagaarka Hoteel Wehliye. – Calamada.com
Faahfaahin Magacyada Saraakiil Lagu Dilay Qarax Ka Dhacay Agagaarka Hoteel Wehliye.
calamada March 13, 2017 2 min read
Faafaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo maanta lagu beegsaday meel isku imaatin oo badanaa ay fariistaan siyaasiyiinta iyo saraakiisha Ashahaada la dirirka ee kooxda ridada Soomaaliya, Iyadoona sidoo kale Idaacadda Islaamiga Andalus ay heshay magacyada qaar ka mid ah saraakiisha lagu dilay qaraxaasi.
Qaraxan oo ahaa mid loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa lagu beegsaday meel ay isugu yimaadaan masâ€™uuliyiinta iyo saraakiisha kooxda ridada Soomaaliya oo ku taalla ka soo horjeedka Hotelka Weheliye ee magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan 30 ruux oo ay ku jiraan saraakiil sarsare ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay qaraxaas, sidoo kalena lagu dhaawacay ugu yaraan 40 kale.
Dadka ku halaagsamay qaraxan waxaa ka mid ah:
General ka tirsan hayâ€™adda Ashahaada la dirirka murtadiinta oo lagu magacaabo Maxamed C/Raxmaan.
Korneel lagu magacaabo Nuur Saafi oo isna ka mid ahaa saraakiisha Ashahaada la dirirka.
Nin kale oo lagu magacaabo Korneel Cumar Maxamuud oo ka mid ahaa ciidamada military-ga.
Nin magaciisa lagu soo koobay Nuur Kuuloow oo ka mid ah shaqaalaha Golaha dhawaaqiida ee kooxda ridada ayaa sidoo kale dhaawac halis ah ku noqday qaraxaas.
Ex-Xildhibaan Xasan Cumar ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadka lagu dilay qaraxa.
Ex-Xildhibaan Maxamed Nuur ayaa isna ka mid ahaa dadka lagu dilay Qaraxa.
Ex-Xildhibaan Cabdullaahi Leesto oo sidoo kale ah Sarkaal ka tirsan Sirdoonka cadowga ayaa isna dhaawac halis ah ku noqday qaraxa.
Cabdullaahi leesto ayaa ah nin ay in muddo ah doon-doonayeen mujaahidiinta oo ku lug lahaa duqeyntii lagu dilay walaalka Sahal Camow oo horaantii sanadkii 2014-ka diyaaradaha Mareykanka ay ku beegsadeen Sh/hoose.
Sidoo kale waxaa dadka goobta lagu laayey ka mid ahaa ilaalada saraakiisha goobta lagu beegsaday iyo maleeshiyaatka ashahaada la dirirka ee kooxda ridada Soomaaliya kuwaas oo tobaneeyo ay goobta kaga dhimatay kuwa intaas ka badana looga dhaawacay.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo. 14-06-1438Hijri
Next: Halkan Ka Dhageyso Faafreebka Wararka 15-06-1438Hijri.